DHEGEYSO-Madaxweynaha Galgaduud Sare iyo wafti uu hogaaminayo oo gaarey Caabudwaaq. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Madaxweynaha Galgaduud Sare iyo wafti uu hogaaminayo oo gaarey Caabudwaaq.
Luulyo 5, 2016 9:32 b 0
(July 05 2016)-Wafdiga uu hogaaminayay Madaxwaynaha Galgaduud Sare ayaa dib ugu soo laabtay Magaalada Caabudwaaq ee Gobalka Galgaduud, waxaana uu ka warbixiyey safarkiisii iyo arrimo quseeya horumarinta maamulkaasi.
Madaxweynaha Puntland oo shacabka ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidul Fidriga.
DHEGEYSO-Kulan looga hadlayo ammaanka gobolada dhexe oo kadhacay Dhuusamareeb.